Europe kuenda kuAsia: Bahrain ine inokurumidza kwazvo Sea-to-Air Logistics Hub
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Europe kuenda kuAsia: Bahrain ine inokurumidza kwazvo Sea-to-Air Logistics Hub
Bahrain Kuputsa Nhau • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako!
Humambo hweBahrain hwatanga iyo inokurumidza dunhu yakawanda-modal logistics hub mudunhu iine chete 2hr yekushandura nguva yezvose midziyo - zvichireva zvigadzirwa zvinogona kuve nevatengi muhafu yenguva uye pa40% yemutengo.
Kuvhurwa kwe "Bahrain Global Sea-Air Hub" kunoisa mbiri panzvimbo yeBahrain pakati pemisika yeEuropean neAsia uye padyo nemisika yematunhu nekumisikidza hunyanzvi hwakawanda hwekufambisa mweya mugungwa nharaunda ine kusvika pasi rose.
Iyo hub inovimba nematanho akachenurwa ekujekesa, zvakagadziriswa mashandiro, uye yakazara digitization kuzadzisa yekupedzisira-kusvika-kumagumo kutungamira nguva isingasviki maawa maviri yezvinhu zvinofamba zvichibva kuBahrain International Airport kuenda kuKhalifa bin Salman Port, uye zvinopesana.
Iyi mibairo inoshandura kune 50% kudzikisira muvhareji lead nguva uchienzaniswa neyakachena kutakura zvinhu uye 40% kudzikisira mumutengo uchienzaniswa neyakachena mweya yekutakura. Saizvozvowo, Bahrain yegungwa-yemhepo hub inoshanda senzira yakakosha kune vagadziri uye vatakuri vekutakura zvinhu, kunyanya mumamiriro edambudziko rekutakura.
Bahrain ichapa chinzvimbo chemu Partner muchirongwa ichi kumisika yese pasirese izvo zvinozobvumidza kupa makambani avo epasirese mukana wekuve vanobvumirwa Vanovimba Shipper paBahrain's Global sea-to-air logistics hub.
Gurukota rezvekutakurwa nekuterevhizheni, Bahrain Kamal bin Ahmed akati:
"Kuvhurwa kweGlobal Sea-to-Air logistics hub, inomhanya kwazvo kuMiddle East, muno muBahrain mukana chaiwo kwete chete kumakambani anotakura zvinhu pasi rose asiwo kune vekunze kwenyika. Sevhisi iyi inogona kuendesa ku40% yemari inochengetwa kana ichienzaniswa neyekutakura nendege chete uye ne50% inokurumidza kutungamira kupfuura kutakura kwakachena kwegungwa. "
Akawedzera kuti: "Tinogona chete kuita izvi nekuda kwenzvimbo yedu yakasarudzika, kuswedera kwemachiteshi edu, pamwe nevatongi vedu, vanoshanda pamwe nevakuru vezviteshi vanoshanda pamwe chete uye yedu yemhando yepamusoro yekugadzirisa dhijitari."
Iri hubhu rinogonesa kukura kweiyo Bahrain logistics chikamu chinozobatsira kuwedzera kusiyanisa hupfumi hwehumambo. Bahrain isiri yemafuta GDP gore-ne-gore kukura kwakasvika 7.8% muQ2 muna 2021.
Mari yekushandisa mukati mechikamu chekugadzirisa zvinhu iri pasi pe45% muBahrain zvichienzaniswa nemisika iri pedyo, sekureva kweKPMG 2019 mushumo "Mutengo wekuita Bhizinesi muLogistics". Izvi zvakaisa Bahrain senzvimbo inokwezva yemabhizinesi epasirese uye enharaunda anoshanda mukati mechikamu.
Nezve Ministry of Transportation uye Telecommunications (MTT)
Gurukota rezvekutakurwa nekuterevhizheni rweBahrain (MTT) ibazi rehurumende rinoona nezve kusimudzira nekutonga kwehumambo hwekutakurwa uye nharembozha nemaitiro.
Nechinangwa chepamusoro chekusimudzira hupenyu hwehupenyu uye kufambisa kufamba kwevanhu nenhumbi kuburikidza nepasi, gungwa, uye nendege nendege zvinoenderana neEconomic Vision 2030, MTT yakapihwa basa rekuvandudza mafambisirwo akareruka uye anochengetedza ekufambisa nemaindasitiri enhare kutsigira Umambo. kukura kweupfumi.